Category: समाचार	नेपालगञ्जमा मध्य तथा पश्चिमाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी	काठमाडौँ, ३१ चैत्र । वि.सं २०७३ चैत्र २४ र २५ गते नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा हीरक महोत्सवका सन्दर्भमा बाँकेको नेपालगञ्जमा दुई दिने वाङ्मय गोष्ठीको आयोजना गरियो । ‘मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी’को प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनपछि गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै कुलपतिले प्रतिष्ठानले हीरक महोत्सवका अवसरमा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कुलपतिले भन्नुभयो, ‘मध्य तथा सुदूरपश्चिमको भाषा, संस्कृति र कला–साहित्यलाई मूलधारको साहित्यमा जोड्न यो वाङ्मय गोष्ठी राखिएको हो ।’ उहाँले प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा लागेको तथा विश्वका ज्ञानविज्ञानलाई मुलुकमा भित्र्याउन र यहाँको ज्ञानविज्ञानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पु¥याउन प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको प्रस्ट्याउनु भयो ।
यसै गरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शेराज सिवाकोटी, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला, मदन पुरस्कार विजेता कथाकार रामलाल जोशी, साहित्यिक पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा, प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सचिव सनत रेग्मी, साहित्यकार सच्चिदानन्द चौवे लगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
हीरक महोत्सवमा दस साधकलाई पुरस्कृत गरिने	काठमाडौँ, २२ चैत्र । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नेपाली वाङ्मयका दस विशिष्ट प्रतिभाहरूलाई जनही एक लाख नगदसहित ‘प्रज्ञा विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार’द्वारा पुरस्कृत गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त जानकारी गराएको हो ।
कुलपति उप्रेतीले भन्नुभयो, “यसका साथै प्रतिष्ठानले सो अवसरमा ‘नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गौरवमय साठी वर्ष’, ‘साठी वर्षका भाषिक चर्चा’, ‘मैथिली–नेपाली–अङ्ग्रेजी शब्दकोश’, ‘तामाङ व्याकरण’ लगायत करिब तीन दर्जन महत्वपूर्ण ग्रन्थ–पुस्तकहरूको प्रकाशन गर्र्नेछ ।” उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले २०७३ असार ९ गतेदेखि प्रतिष्ठान हीरक वर्षमा प्रवेश गरेको र सो उपलक्ष्यमा त्यसयता देशभरि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका गोष्ठी तथा समारोहहरूको आयोजना भइरहेको सुनाउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “आगामी असार ९ गते राजधानीमा आयोजना हुने वार्षिक उत्सवसँगै यो हीरक महोत्सव समापन हुनेछ ।”
राष्ट्रपतिद्वारा कविहरू पुरस्कृत	काठमाडौँ, १९ चैत्र । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा विजयी कविहरूलाई पुरस्कार तथा पदक प्रदान गर्नुभएको छ । प्रतिष्ठानले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा चैत्र १७ गते बिहीबार आयोजना गरेको पुरस्कार अर्पण समारोहमा राष्ट्रपतिले सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो । समारोेहमा गत वर्ष र यस वर्ष कविता महोत्सवमा विजयी हुन सफल कविहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । समारोहमा यसै वर्षको असार ९ गते आयोजित कविता महोत्सवमा प्रथम भएका कवि मणिराज सिंह, द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल पुरु लम्साल र तृतीय स्थान हासिल गर्ने कविहरू असीम सागर, त्रिलोचन आचार्य र मञ्जुश्री गिरीलाई पदक, प्रमाणपत्रका साथै नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
यसै गरी गत वर्ष आयोजित कविता महोत्सवमा तृतीय भएका कविहरू राजु स्याङ्तान, सोझो गाउँले र सुदेश सत्याललाई राष्ट्रपतिले पुरस्कृत गर्नुभयो । प्रतिष्ठानकोे नियमविपरीत भएकाले गत वर्षका प्रथम र द्वितीय स्थान हासिल गरेका कविलाई भने पुरस्कार दिइएन ।
प्रथम हुनेलाई ३० हजार, द्वितीयलाई २५ हजार र तृतीयलाई २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरियो । समारोहमा पुरस्कृत कविहरूले आ–आफ्ना कविता सुनाए । कविता श्रवण गरिसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले कविताहरू समसामयिक, चिन्तनशील र सम्प्रेषणीय भएको बताउनुभयो । उहाँले सिर्जना र प्रतिभालाई मञ्च दिनु आवश्यक रहेको औँल्याउँदै लोकतन्त्र स्थापनामा साहित्यको अमह् भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानले वि.सं. २०२२ देखि आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ । पहिलो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित महोत्सवमा भैरव अर्याल प्रथम भएका थिए । त्यो बेला वानीरा गिरी द्वितीय र गोविन्द भट्ट तृतीय भएका थिए । समारोहमा तृतीय स्थान प्राप्त भट्टको ‘नैतिकता’ शीर्षक कविता पनि सुनाइएको थियो ।
गत दुई वर्षअघिदेखि विगतमा भन्दा पृथक् ढङ्गले कविता महोत्सवको आयोजना गर्ने गरिएको प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो । ‘कवितासम्बन्धी विमर्शसहित गत दुई वर्षअघिदेखि हामीले राष्ट्रमा बोलिने विभिन्न मातृभाषाका कविताको महोत्सव पनि आयोजना गर्न थालेका छौँ ।’
समारोहमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले विषयमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । काव्यविभाग प्रमुख डा. अमर गिरीले कविता महोत्सवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कविता विधाको उन्नयनका खातिर महोत्सव आयोजना गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले राष्ट्रपतिज्यू र आमन्त्रित अतिथिहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
प्रज्ञामा मनाइयो विश्व कविता दिवस	काठमाडौँ, ८ चैत्र । विश्व कविता दिवस (२१मार्च)का अवसरमा मङ्गलबार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा विशेष कवि गोष्ठीको आयोजना गरियो । कवि गोष्ठीमा चौतीस जना नयाँ–पुराना पुस्तका कविहरूले कविता वाचन गर्नुभयो । उक्त विशेष कवि गोष्ठीमा विमल निभा, श्यामल, पुरुषोत्तम सुवेदी, पूर्णविराम, ज्ञानुवाकर पौडेल, विजय सुब्बा, वासुदेव अधिकारी, प्रतिसरा सायमी, विप्लव ढकाल, मोमिला, भीष्म उप्रेती, उमेश राई अकिञ्चन, केबल विनावी, केशव सिलवाल, कृष्ण प्रधान, गीता कार्की, गीता त्रिपाठी, टङ्क उप्रेती, धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङले कविता सुनाउनुभयो ।
भीमनिधिको १०६औँ जन्मजयन्ती	काठमाडौँ, ३० फागुन । नेपाली साहित्यका मूर्धन्य साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको १०६औँ जन्मजयन्तीका उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र भीमनिधि तिवारी साहित्य समितिद्वारा संयुक्त रूपमा सोमबार प्रज्ञाभवन कमलादीमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरियो ।
कार्यक्रममा तिवारी साहित्य समितिकी सदस्य सचिव डा. वेन्जु शर्माले संस्था तथा तिवारीको साहित्यिक योगदानमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो भने डा. तुलसी भट्टराईले सम्मानित तथा पुरस्कृत स्रष्टाहरूका विषयमा बोल्नु भएको थियो । यसै गरी कार्यक्रममा प्रा.डा. दुर्गाप्रसाद अर्यालले नेपाली साहित्यमा साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको योगदानका विषयमा गोष्ठीपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त अवसरमा कुलपतिद्वारा तिवारीका कथा सङ्ग्रह ‘गुलियो’ र ‘भजनको सीडी’ पनि विमोचन गरिएको थियो ।
नारी दिवसका अवसरमा विशेष विचार गोष्ठी	काठमाडौँ, २७ फागुन । “नारी र पुरुषबिचको सहअस्तित्व र अन्तरसम्बन्ध प्रगाढ बने मात्रै जीवन सफल र सुमधुर हुन्छ” नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले प्रतिष्ठानको समालोचना तथा निबन्ध विभागद्वारा १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी सम्पन्न	विराटनगर । पूर्वाञ्चलको ऐतिहासिक नगरी विराटनगरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले हीरक वर्षको अवसरमा ‘पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी’ आयोजना गरेको छ । फागुन १९ र २० गते हाटखोलास्थित आरोहण गुरुकुलमा सम्पन्न सो गोष्ठीमा समालोचना, संस्कृति, मातृभाषा र उपन्यास सम्बन्धी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । समालोचनासम्बन्धी रामजी तिमल्सिना, संस्कृतिसम्बन्धी डा. सोमप्रसाद खतिवडा, मातृभाषासम्बन्धी मुनाराज शेर्मा र उपन्याससम्बन्धी डा. गोपाल भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि क्रमशः डा हरिहर भण्डारी, दधिराज सुवेदी, देवान किराँती र डा. बद्रीविशाल पोखरेलले टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।
प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेलद्वारा उद्घाटित उद्घाटन सत्र समारोहको सभापतित्व प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले गर्नु भएको थियो । उुद्घाटन सत्रमा साहित्यकार दधिराज सुवेदी र प्रगतिशील लेखक सङ्घकी उपाध्यक्ष कवि मिश्र बैजयन्ती लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । प्रमुख अतिथि पोखरेलले विराटनगरलाई रोजेर वाङ्मय गोष्ठी आयोजना गरिएकोमा प्रतिष्ठानप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वमा यस्ता गतिविधिको खाँचो थियो । यसपालि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले पूरा गरिदियो । पूर्व धन्य भएको छ ।’
उपकुलपति घिमिरेले प्रतिष्ठानले हीरक वर्षको अवसरमा पूर्वको विराटनगरपछि चैत्रको दोस्रो हप्तातिर पश्चिमको नेपालगञ्जमा बृहत् वाङमय गोष्ठी आयोजना गर्ने सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय कार्यक्रमचाहिँ वैशाखको तेस्रो सातातिर राजधानीमा आयोजना गरिने छ ।’
उद्घाटनपछि विचार गोष्ठीको आयोजना गरियो । गोष्ठीको प्रथम सत्रको सभापतित्व प्राज्ञ डा. ज्ञानु पाण्डेले र दोस्रो सत्रको सभापतित्व प्राज्ञ मातृका पोखरेलले गर्नु भएको थियो । गोष्ठीको औचित्यमाथि प्राज्ञ दिनेशराज पन्तले प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको हीरक वर्ष पूवाञ्चल वाङ्मय गोष्ठीको दोस्रो दिन अर्थात फागुन २० गते विराटनगरमा करिब एक सय कविबाट कविता वाचनसहित गोष्ठी समापन गरियो । बिहान ९ बजे प्रारम्भ भएको गोष्ठी साँझ ५ बजेसम्म चलेको थियो ।
प्राज्ञ श्रवण मुकारुङको सभापतित्वमा दोस्रो दिन कविता महोत्सव सञ्चालन भएको थियो । प्राज्ञ मुकारुङले वाचित कविताहरूले समयको आवाज बोलेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै प्राज्ञ शशी लुमुम्बूले पूर्वको कार्यक्रमले ऊर्जा मिलेको बताउनुभयो ।
कविता गोष्ठीमा कविहरू मन्जु काँचुली, कुन्ता शर्मा, मातृका पोखरेल, अनिल पौडेल, भवानी क्षत्री, मनु मन्जिल, सुमन पोखरेल,पुन्य कार्की, राधिका गुरागाईं, विमल वैद्य, अयोध्यानाथ चौधरी, रामविक्रम थापा, सुको साइबर, सविता गौतम दाहाल, मुकुन्द प्रयास, डा भीम खतिवडा, डा नवराज सुब्बा, लीला अनमोल, मधु पोखरेल, जीविका खतिवडा, धनकुटे कान्छा, केजी सुब्बा, बोधकुमार घिमिरे, मन्जुश्री गिरी, डा मेदिनीप्रसाद शर्मा, मनु विश्वकर्मा, रमेशचन्द्र अधिकारी, कविता राई गाउँलेले कविता वाचन गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी राधिका गुरागाई, मीनकुमार नवोदित, जिबिका खतिवडा, दिङ्लाली कान्छो, दीपक आयाम, सन्देश लिम्बू, प्रवीणकुमार चौधरी, कविराज पोखरेल, बसुश्री पाण्डे, टीका मिलन, पूजा आराधना, हरि बराल, हेमन्त क्षितिज, शुभलक्ष्मी लम्साल, ताराबहादुर बुढाथोकी, धीरज राई, रीता ताम्राकार, दीपक सम्चु, माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे, हरि कट्टेल, रमाप्रसाद रिजाल, कृष्ण उदासी, विष्णु न्यौपाने, मुनाल पोखरेल, मन्जिला शर्मा, लक्ष्मी ढुंगाना, मेनुका चापागाईं, सरिता तुलाधर, सन्जीव धिमाल, सीता सुवेदी, रोशन परियार, सत्यनारायण ताम्राकार, स्वयम्भूनाथ कार्की, कविता केशरी, रोमा निरौला लगायतका कविहरूले आआफ्ना कविता वाचन गरेका थिए । प्राज्ञ विवश पोखरेलको संयोजकत्वमा पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा पूर्वका विभिन्न जिल्लाका साहित्यकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
तेस्रो राष्ट्रिय पुस्तक मेला शुरु	काठमाडौँ, ६ फागुन । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेरर नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान परिसरमा फागुन ५ गते बिहीबारदेखि तेस्रो राष्ट्रिय पुस्तक मेला सुरु भएको छ । प्रतिष्ठान र नेपाल पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको पुस्तक मेला फागुन १४ गतेसम्म चल्ने छ । मेलाको उद्घाटन प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले गर्नुभयो ।
मेलाको उद्घाटनपछि कुलपति उप्रेतीले यस्तो मेलाले विविध रुचिका पाठकहरूलाई आकर्षित गर्नुका साथै पठन संस्कृतिको विकासमा सहयोग पु¥याउने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष पदम सिवाकोटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरे, सदस्यसचिव डा. जीवेन्द्र देव गिरी, सङ्घका पूर्व अध्यक्ष वसन्त थापा, महासचिव लिखत पाण्डे लगायतले पुस्तक मेलाको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । नेपाली पुस्तकहरुको प्रवर्द्धन गरी पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजित मेलामा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन, फाइनप्रिन्ट, भृकुटी बुक्स, पैरवी प्रकाशन, रत्न पुस्तक भण्डार लगायतका प्रकाशक सहभागी भएको मेलामा १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
मेला अवधिभर पुस्तक विमोचन तथा साहित्यिक विर्मशका विभिन्न कार्यक्रम समेत हुनेछन् । गत वर्ष भने विनासकारी भूकम्पका कारण मेला स्थगित भएको थियो ।
राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव सम्पन्न	काठमाडौँ, १० फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस २०१७ का अवसरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा ‘राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव’को आयोजना गरियो । महोत्सवमा देशभरिका ४० भाषाका ४२ कवि कवियत्रीले कविता वाचन गर्नुभयो । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा १२३ भाषा बोलिन्छ । मातृभाषाकै रुपमा रहेका सङ्ख्या यकिन छैन । भाषाशास्त्रीले ती मातृभाषाहरुको अवस्था लोपोन्मुख छ भनिरहेका छन् । तिनै लोपोन्मुख भाषाको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि वर्षमा एक दिन साइत जुर्ने गरेको छ–२१ पे्रmबु्रअरी अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस । यही दिवसको अवसर पारेर नेपाल प्रज्ञा– प्रतिष्ठानले ‘राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव’ आयोजना गरेको हो ।
नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै देशहरूका विविध मातृभाषाहरु लोप भइरहेको प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइँलाले बताउनुभयो, ‘२०४६ सालपछि नेपालमा हामीले हेर्दाहेर्दै धेरै भाषाहरु लोप भइसके,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो भाषा नबोल्नु, नलेख्नु, प्रयोग नगर्नुले नै ती भाषा लोप भएका हुन् । जातिगत भाषा र पहिचान बचाएमा मात्र नेपालीत्व बलियो हुन्छ ।’ भाषिक पर्यटनको विकास गर्न सकेमा लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्न सकिने उहाँको सुझाब थियो । उहाँले ‘मातृभाषामा वाचन भएका कविताहरु नबुझेपनि मातृभाषा बोलेको सुन्दा भने छुट्टै आनन्द लागेको’ सुनाउनु भयो ।
नेपालका हरेक भाषाको उच्च महत्व रहेको बताउँदै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले ‘भाषाले जातीय अभिव्यक्ति दिने मात्र नभई नेपालीलाई एकवद्ध गरेको छ’ बताउनुभयो । मातृभाषाका कवितामार्फत् कविहरुले भाषिक पहिचान र पीडाहरु पोखेको प्रतिष्ठानका मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले सुनाउनु भयो । पूर्वजहरुको भाषाको जगेर्नाका लागि गरिएको कार्यक्रममा दक्षिण कोरियास्थित युरेसिया कल्चर फोरमका महासचिव दायकि जुङले खुसी व्यक्त गर्नुभयो, ‘इतिहासमा बिलाएर जान सक्ने भाषालाई नेपालमा साहित्यमार्फत् जोगाउने कोसिस गरेको पाउँदा मलाइृ राम्रो लाग्यो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भाषा नबुझे पनि कविताको अन्तरध्वनिमार्फत् बुझ्ने कोसिस गर्छु ।’
युनेस्कोले सन् १९९९ मा फ्रेबु्रअरी २१ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।। सन् २००० बाट यो दिवस विश्वव्यापी रुपमा मनाउन थालिएको हो । मातृभाषा आन्दोलनका क्रममा बंगलादेशका चार विद्यार्थीले सहादत पाप्त गरेका थिए । तिनै सहिदको बलिदानीको कदर स्वरुप युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस विश्वव्यापी रुपमा मनाउने परम्पराको थालनी गरेको हो । महोत्सवमा अतिथि कविहरू शैलेन्द्र सिम्खडाले ‘तामाङ’ भाषाको कविता र मुक्तिनाथ घिमिरेले ‘दुरा’ भाषामा कविता वाचन गर्नुभएको थियो । महोत्सवमा तामाङ भाषामा काभ्रेकी रञ्जना मोक्तान र सिन्धुलीका रुपक घलानले कविता वाचन गर्नुभयो । आनन्द गुप्ताले ‘भोजपुरी’, स्मृति अधिकारीले ‘खस’, रमेश केवरतले ‘केवरत’, लक्ष्मी ऐडीले ‘हुम्ली’, किरणकुमार बरामले ‘बराम’, रमा खड्काले ‘डोटेली’, जिडी राईले ‘बान्तावा’, मोनालिसा तेङमालीले ‘धिमाल’, सुशील थारुले ‘थारु’, टेक लाओतीले ‘लिम्बू’ भाषामा वाचन गर्नुभयोे ।
त्यसैगरी खोटाङकी अम्बिका वाम्बुले राईले ‘वाम्बुले’, रेनुका बाहिङले ‘बाहिङ’, लोचनज्योति राईले ‘चाम्लिङ’, भावनाकुमारी झाले ‘मैथिली’, श्रीकुमार पुमा राईले ‘पुमा’, शोभा सुनुवारले ‘सुनुवार’, विकेश थामीले ‘थामी’, कुमारी शरणा उराँवले ‘उराँव’, तेजमाया मुरह दुमीले ‘दुमी’, तेजेन्द्र ताजपुरियाले ‘ताजपुरिया’, छम गुरुङले ‘गुरुङ’, नवीनप्रकाश श्रेष्ठले ‘नेपालभाषा’ लगायत ४० भाषाका ४२ वटा कविता वाचन गरिएका थिए ।
यसैगरी मुगाल, घले, याक्खा, नाछिरिङ, मगर ढुट, कुलुङ, उर्दू, मगर खाम, बज्जिका, मगर काइके, अवधी, कुमाल, लोहोरुङ, ल्होमी, छलङ भाषाका रचना वाचन गरिएको थियो । दुई दिने महोत्सवको दोस्रो दिन तामाङ, धिमाल, लामा, लिम्बु, थारु, नेवार, गुरुङ, सुनुवार, राई, घले, हुड्काली, मगर जातिका साँस्कृतिक झाँकीसहित ¥याली प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रज्ञा भवन परिसरबाट सुरु भएको ¥याली रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक हुँदै पुनः प्रतिष्ठानमै पुगेर कविता महोत्सवमा सहभागी भएको थियो । ¥यालीको नेतृत्व मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा विचार गोष्ठी	काठमाडौँ, ९ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस–२०१७ का अवसरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भाषा आयोग र युनेस्को काठमाडौँद्वारा संयुक्त रूपमा ‘मातृभाषा विचार गोष्ठी’को आयोजना गरिएको छ ।
»	Recent	Popular	सूचना	Invitation for Bid